Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Nọmba 3 -> Ihe ngosi mgbakọ na mwepu
Ihe ngosi mgbakọ na mwepu: [Nọmba 3]
ỌLU OZI 17:28
Nꞌihi na nꞌime ya ka anyị na-adị ndụ, anyị na-ejegharịkwa nꞌime ya. Dị ka otu onye nꞌetiti unu na-ekwu sị, ‘Anyị onwe anyị bụkwa ụmụ Chineke.’
1 JỌN 5:7-9
 Mmụọ Nsọ, onye okwu ya nile bụ eziokwu, kwukwara otu ihe ahụ. Ya mere, anyị nwere ndị akaebe atọ: Olu Mmụọ Nsọ na-ekwu okwu nꞌobi anyị, na olu ahụ si nꞌelu kwuo okwu nꞌoge e mere Jisọs baptizim, na nꞌoge ọnwụ ya. Olu ndị a nile na-ekwukwa otu ihe ahụ, na Jisọs bụ Ọkpara Chineke. Ha atọ kwekọtara nꞌotu ihe ahụ. Nꞌụlọ ikpe anyị, anyị na-anabata ọgụgba ama ndị mmadụ dị ka eziokwu. Anyị kwesịkwara ịnabata ama Chineke gbara. Nꞌihi na Chineke kwuru na Jisọs Kraịst bụ Ọkpara ya.